Ogaden News Agency (ONA) – Hawaarinta oo Dad Shacab Ah Raaso Ku Waxyeelaysay
Hawaarinta oo Dad Shacab Ah Raaso Ku Waxyeelaysay
Posted by ONA Admin	/ July 31, 2018
Sida ay kusoo waramayaan goob joogayaal ku sugan Raaso, kooxda Hawaarinta/Liyuu booliska ayaa dad shacab ah rasaas ooda uga qaaday.
Warkan ay ONA heshay ayaa tibaaxaya in labo wiil uu dhaawac halis ah soo gaadhay kadib markii ay kooxda Hawaarintu si aan naxariis iyo banii’aadminimo lahayn rasaas ugu fureen shacab aad utiro badan oo banaanbax nabad galyo ah iskugu soo baxay.
Shacabkan banaanbaxa dhigayay ayaa ka cabanayay degmooyin la sheegay in Maamul ku sheega Jigjiga ay shalay ku dhawaaqeen. Arintan oo shacabka Soomaaliyeed ee Gumaysiga Itoobiya ku hoos dulman aad ula yaabeen ayaa la sheegay in tiro badan oo degmooyin ah lagu dhawaaqay.
Hadaba, Shacabka Raaso oo filanayay in Degmadooda gobol laga dhigi doono ayay filansho waa ku noqotay kadib markii ay liiska la sheegay ee degmooyinka cusub iska dhex arki waayeen taasoo keentay inay dareenkooda ku cabiraan banaanbax balse nasiib darro taas badalkeeda rasaas jawaab looga dhigay.
Hadaan nahay bahda ONA waxaan ilaahay uga baryaynaa in dadkan sida xaq darada ah loo dhaawacay uu u boogadhayo caafimaad deg deg ahna siiyo.